नेपालमा भेटीएको कोरोनाभाइरसको नयाँ भेरिअन्ट कस्तो हो र कति खतरनाक हो? – Sapana Sanjal
May 19, 2021 240
Sapana Sanjal : स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मंगलबार नेपालमा नयाँ भेरियन्ट अर्थात् ‘भारतीय भेरियन्ट’को कोरोनाभाइरस फैलिएको पुष्टि गरेको छ । कोरोना परीक्षण गरिएको नमुनामध्ये ९० प्रतिशत नयाँ भेरियन्टको कोरोना फेला परेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । यो भेरियन्ट पहिलो पटक छिमेकी मुलुक भारतमा फेला परेको हुनाले यसलाई ‘भारतीय भेरियन्ट’ पनि भनिएको हो ।
तर, भनिन्छ यो भाइरसले बन्द कोठामा बसेको एउटै सङ्क्रमितले सयौं जनासम्मलाई एकै मिनेटमा यो भाइरस सार्न सक्छ, के हो खासमा ? सङ्क्रमति व्यक्तिसँग एउटै कोठामा बस्दा सङ्क्रमितले खोक्दा, हाच्छुयूँ गर्दा अर्को व्यक्तिमा सर्ने सम्भावना बढी हुन्छ । किन भने बन्द कोठामा भाइरस तीन घण्टासम्म बस्न सक्छ । एयर वान भएको कारण सङ्क्रमण धेरै हुने देखिएको छ । एउटै परिवारका सबै परिवार सङ्क्रमित हुनु भनेको त्यहि नै हो ।
नेपालमा मङ्गलवार पुष्टि भएको नयाँ भाइरस सबै उमेर समूहमा धेरै सङ्क्रामक र जोखिमपूर्ण रहेको अध्ययनहरूबाट पाइएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।
यद्यपि नेपालमा अझै पर्याप्त परीक्षण नगरिएकोले ठोकुवा गरेर भन्न गाह्रो हुने भाइरोलोजिस्ट खड्का बताउँछन्।
“तर अहिलेसम्म यो भाइरसले सङ्क्रमित बनाएको उमेर समूहलाई हेर्दा १८ देखि ५० वर्षसम्मको समाजमा जुन चलायमान उमेर समूह छ सङ्ख्यात्मक रूपमा त्यही बढी सङ्क्रमित भएको देखिन्छ। तर मृ,त्यु चाहिँ ६० वर्षमाथि बढी छ।”
Prevएकाबिहानै लमजुङमा गयो शक्तिशाली भूकम्प, काठमाडौंमा पनि हल्लायो हल्लाउंदा सात वटा घर भत्किए, चार जना पुरिए
Nextआज कोरोनाको मृत्युमा नयाँ रेकर्ड, सयौंको मृत्यु हजारौं थपिए संक्रमित
एयरपोर्टमा लोडरको काम गर्ने विष्णु अधिकारी पक्राउ, शंका लागेर डेरामा पुग्दा प्रहरीनै चकित !